Ala honko: hampitomboina avo roa heny ny fambolena sy fiarovana | Région Boeny
Ala honko: hampitomboina avo roa heny ny fambolena sy fiarovana
24 juin 2015 A La Une, Actualité
137 hektara ny velaran-tany voavoly honko tao anatin’ny Kaominina Boanamary ny taon-dasa.
Ho ampitboina avo roa heny izany ezaka izany ary ho hentitra ny fanaraha-maso ireo mpitetitetika ny ala honko.
Io no nambaran’ny Talen’ny kabinetran’ny ministeran’ny Harena anaty rano sy ny Jono, Atoa Hevidrazana Jean Lys nandritra ny fanokafana ny foara Ala honko misôma ny zoma 19 sy ny sabotsy 20 jiona 2015, tao amin’ny kaomina ambanivohitra Boanamary, distrikan’iMahajanga II. Nohamafisiny fa tanjon’ny ministera ny hanafoana ny fahasimban’ny tahirin-karena anaty rano. Tetika mahomby iray voalohany amin’izany hoy izy ny fambolena sy ny fiarovana ny ala honko.
Nijoro vavolombelona ireo Vondron’olona eny ifotony (VOI), nanambara fa efa mahatsiaro ho tonga saina ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ala honko izy ireo. Taorian’ny nitarihan’ny fandaharan’asa alemaina misahana ny tontolo iainana azy ireo na PAGE-GIZ (Programme d’appui à la gestion environnementale) hatramin’ny taon-dasa dia tsapan’izy ireo ny fihatsaran’ny vokatry ny jono drakaka sy akamba ary dia nihatsara araka izany ny vola niditra hoy ireo mpikambana ao amin’ny VOI Ambatomalama, Tsararivotra, Fifabe, Avotry ny Boanamary sy Avotry ny Morariva.
Ankoatry ny fampirantiana tanaty tranoheva ireo vokatra an-tanety toy ny tantely, sy ny anaty rano toy ny akamba sy ny tsivakia (patsa fotsy), izay ateraky ny fisian’ny ala honko any an-toerana, dia nisy ihany koa fanatevenana ny ala honko novolena tamin’ny taon-dasa. Nifandrimbona namboly maro izay tratra tamin’ireo mpandraharaha tsy miankina ary ny fokonolona tany an-toerana ireo sampandraharaham-paritra ny Tontolo iaiana, ny Ekolojia sy ny Ranomasina ary ny Ala, ny any avy ao amin’ny ny Harena anaty rano sy ny Jono, ary ny Faritra Boeny.
Nisy ankoatra izay fizarana fanamina ho an’ireo Polisin’ala sy ny fampisehoana ny fomba tokony hataon’izy ireo rehefa amperin’asa izy amin’ny fiarovana ny harena anaty rano sy ny ala honko. Nanafana ny foara ny loa-bary an-dasy sy ny kilalao an-tsaina, ary ny sarimihetsika izay niompana tanteraka tamin’ny Tontolo iainana sy ny Harena anaty rano.
Ala Honko Baonamary